Zama ukujonga yezitshixo. Kuya kuba nzima ekuqaleni, kodwa njengoko uqhubeka kwelemi, uya kufumanisa ukuba kuba lula neminwe yenu iya uqale ukususa ngaphandle ukuzabalazela isigqibo apho umnwe esidityaniswe istshixo.
Njengoko ufunda ukuchwetheza, khangela ngaphezu keyboard ukubona apho umnwe ukusebenzisa. Musa ukoyika ukwenza impazamo hayi - Ukuba wenjenjalo, le nkqubo iza kukubonisa isitshixo ukusebenzisa. Ukuba iqhosha ilungile, libonisa eluhlaza, ukuba kuphosakele - ngoko ebomvu.
Ngoko zama ukungenisa ulwazi ndilufumeneyo njengenxalenye yemisebenzi yakho ngemihla kwi computer, akukho ndlela ibhetele ukufunda ngayo ukuchwetheza.
Cwangcisa i ucwangciso. Ngaphandle kokuba ukuseka ishedyuli yokufunda, kulula kakhulu ukufumana njengesigqubuthelo asiyiqheliseli.
Gcina esweni inani iimpazamo olwenzayo ingqalelo ekunciphiseni iimpazamo zakho iimvavanyo elizayo kunokuba ukwandisa isantya yakho ukuchwetheza. Isiphetho iya kunyuswa imveliso.
Ungafumana kuluncedo ukuba bathi cwaka igama isitshixo njengoko Wombetha nto. Musa ukuvumela iimpazamo zakho zikwenza ukuba ningethi amandla; ukuchwetheza yasemgceni sisakhono enokufundwa sisenzo.
Linda. Xa zifundwa iipateni echanekileyo ngomnwe-keystroke, isantya nokuchaneka zenzeka ngokwendalo.
Move kuphela umnwe ezifunekayo ukuze kubekho isitshixo. Musa ukuvumela abanye iminwe ukubhadula kude izitshixo umqolo ekhaya abazabelweyo.
iminwe yakho mayibe phezu izitshixo kumqolo ekhaya izandla zakho kufuneka elibi akwiengile efanayo yezitshixo. Musa ukuvumela ezihlahleni sisasebenza yaye niphumle ngokuchasene kwedesika okanye yezitshixo.
Zinyamekele umthambo ngalinye izihlandlo eziliqela de wonelisekile ngezakhono zakho ukuchwetheza.
Musa bang phezu izitshixo. Zama ukusebenzisa amandla kancinci kangangoko kunokwenzeka. Khululeka phakathi mazwi kokuphumla zonke iminwe ezilishumi phezu izitshixo.
Ndiphumle isandla ngaphandle kokuyenza isebenze izitshixo, ulahle yonke iminwe ezintlanu ngaxeshanye naphi na kwi yezitshixo komhlaba.
Ngqisha lula kodwa crisply ngomnwe ngesimboli enye iqhosha ngalinye ngexesha, ukunyamekele ukuba ukuvingca ngempazamo izitshixo engacwangciswanga.
Ukuze isebenze auto-phinda, ningachukumisi ubambe umnwe omnye kwiqhosha olifunayo. Phakamisa ngomnwe ukuba uyeke auto-phinda.
Ngokuchwetheza imidlalo yindlela eyolisayo yokuphucula isantya yakho typing nokuchaneka. Kumnandi xa ufunda!
Exercises nolungelelaniso ngomnwe noxinezeleko umthambo nokunciphisa kuya kukunceda ukuba wehlise iingxwabangxwaba babedla wabeka uncumo ebusweni bakho. A onwabe kunye kumnadi inokusinceda inokonwatyiswa kukufunda.
Qinisekisa uvumela imizuzu angama-30 kwisifundo ngasinye.
Qinisekisa ukuba ugcine iminwe yakho likufutshane kwindawo ekhaya kangangoko nokunciphisa iintshukumo isandla sakho ngoxa ufunda.
Ukufunda ukuchwetheza konke malunga ukwenza iimpazamo, ngoko musani mabangabatyhafi xa ubetha isitshixo engalunganga.
Zama ukuchwetheza kunye ngesantya esingaguqukiyo.
Ukuphakamisa ezihlahleni kuya kuqinisekisa iminwe bakho iphumayo phantsi kwaye betha izitshixo ngokukhawuleza kwaye ngokuchanekileyo.
Ukuswitsha phakathi eliphezulu / ukusetyenziswa kunobumba omncinane kusoloko isandla esahlukileyo. Qaphela: oonobumba kwezinye yeebhodi laptop kufutshane ndawonye.
Khangela umgama yakho yezitshixo. Nyenyisa kwesitulo ukuphepha ingxaki eqhelekileyo - ehleli zazikufuphi yezitshixo. Lungelelanisa engile iliso lakho ukunciphisa kwilitha.
Okukhona uyawenza, kokukhona uya uhlobo kwaye kuzakwandisa isantya yakho.
kokuba sazi kakuhle apho ileta okanye isitshixo inani, akuyi kuba nako ukuchwetheza ngaphandle ejonge phantsi yezitshixo.
Ukuba kunokwenzeka, zama ukuqhelisela phezu yezitshixo rhoqo kungekhona yezitshixo laptop.
Mawuzive yezitshixo yakho uze uqiniseke ukuba nokuphakama elifanelekileyo iminwe yakho.
Phambi kokuba uqalise uvavanyo typing speed qiniseka ukuba uhleli nkqo, iinyawo zakho tyaba phantsi. Gcina zezandla zakho kufutshane emzimbeni wakho, ezihlahleni ngqo nomgangatho milenze yakho uze ukhumbule ukuthatha ikhefu rhoqo.
umthambo Relaxing: Gcobisa iminwe ngezandla zozibini kude ngaphandle. Babathabathe semizuzwana emihlanu, ngoko umzimba. Phinda ithuba elipheleleyo izihlandlo ezithathu.
Qiniseka ukulinganisa isantya yakho typing ngamaxesha - nesi sixhobo sethu unako ujonge inkqubela yakho zombini isantya nokuchaneka njengoko ufunda. Inani lamagama ngomzuzu kubonisa inqanaba lakho ukuchwetheza.
uvavanyo lokuchwetheza ukulinganisa izinto ezimbini, isantya kwaye iimpazamo, ngoko ke xa uthatha yethu uvavanyo typing speed, musa khangela kuphela ngesantya sakho.
Ukuba keyboard iphezulu kakhulu (isitulo asezantsi kakhulu) iimpazamo bakholisa ukuba kwenzeka phezulu yezitshixo imiqolo. Ukuba keyboard lisezantsi kakhulu iimpazamo (isitulo eliphezulu kakhulu) zithande ukuba kwenzeka emazantsi yezitshixo imiqolo.
umthambo Relaxing: siyibeke isandla sakho ngendlela efanayo ukwandiswa izihlahla, isicelo ngobunono uxinzelelo usebenzisa kwelinye icala ukuya ubhontsi elandisiweyo ngendlela umva kwicala ezantsi. Bamba imizuzwana emihlanu kwaye ukhululeke. Phinda oku kathathu isandla nganye.
Oku kungafuna kweveki okanye ezimbini ukuze afike isantya ~ amagama-50 ngomzuzu, ukuba uyawenza imizuzu 30-60 yonke imihla. Linda.
Yolula zakho izihlahla iminwe phambi kokuqalisa uvavanyo lokuchwetheza.
Ukuba ufuna ukwenza ukuchwetheza lula, kufuneka uphucule dexterity yakho. Kuyanceda ukuba ukudlala isiginkci okanye esinye isixhobo ukuba ufuna izandla zakho.
umthambo Relaxing: Yolula iingalo zombini ngaphandle ngeminwe kunye bazobe isangqa izandla zakho, ejikelezayo nabo esihlahleni. izangqa ezintlanu kwicala elinye, zintlanu kwelinye icala.
Ncokola nabahlobo kunye nosapho.
Gqibezela isifundo ngasinye, ngoko zama uvavanyo isantya.
Xa ukufunda ukuchwetheza, kubaluleke kakhulu ukuba unamathele kucwangciso ngokuthe yokwenza okanye iminwe wakho uya kuqalisa ukuba balahlekelwe yinkumbulo yabo ikruneke.
umthambo Relaxing: Bamba iingalo zakho yangaphandle nezandla ijonge ezantsi. Phakamisani izandla phezulu ngokungathi ukuxelela umntu ukuba akuyeke. Usebenzisa isandla esahlukileyo, uxinzelelo entendeni yesandla akavukanga. Bamba uxinzelelo imizuzwana emihlanu, ngoko umzimba. Phinda ithuba elipheleleyo kathathu isandla nganye.
Ukuba ufunda ukuchwetheza ukutya lo gama ngokujonga ubeko, uya kuqhubeka kuba nzima kunye iimpazamo zopelo kwaye ababhali xa uye zokwenene iimeko sichwetheza ngokuba akuyi kuba nakho ukubona iimpazamo kwiskrini.
Drape itawuli isandla phezu izandla zakho xa uyichwetheza.
Qala kade kwaye bafunde yonke yezitshixo phambi kokuba afunde ukuchwetheza ngokukhawuleza.
Ukuba ukuchwetheza ebangela ukuba buhlungu, uyeke nangoko uthabathe ikhefu.
Ukuba bafunda yokusebenza, zama ukuba ibonisane kunye nomqeshi wakho ngexesha bathuleyo suku kwangcwaliselwa ukuba izifundo zakho - umqeshi wakho uya ngqo kuxhamla izakhono yakho entsha.
Kunqweneleka ukuphepha uhlala kwindawo enye ixesha elide. Yahlula imihla yakho imisebenzi alternating xa kunokwenzeka.
Oku kunokukunceda ukuba ukusebenzisa i alarm ukukhumbuza ngokwakho ukuba ukuthatha ikhefu yezitshixo yakho.
umthambo Relaxing: Bamba ingalo yakho yangaphandle, kunye ijonge ezantsi entendeni. Drop isandla ezantsi apha esihlahleni. Ukusebenzisa entendeni yesandla esahlukileyo, uxinzelelo ngasemva esandleni lehla. Bamba uxinzelelo imizuzwana emihlanu, ngoko umzimba. Phinda kathathu isandla nganye.
Njengoko ukusebenzisa ikhompyutha landile omabini emsebenzini ekhaya kwiminyaka yakutshanje Strain phindo Ukwenzakala iye enxulumene lwebhodhi.
Ukucutha umngcipheko wakho ekuphuhliseni ukwenzakala ngokugqithisileyo kufuneka silandele indlela elungisleyo yokuma, ubuchule, ifenishala iseti-kwaye Phumlani rhoqo.
kancinane, zezandla kunye yezitshixo kufuneka phezu moya mnye tyaba kwaye imo yekona ekwiqondo 90 ukuya iingalo zakho eliphezulu. Umphezulu iiscreen yakho kufuneka ibe kumgangatho iliso kufutshane.
Musa ukuyikhangela ubeko xa uyichwetheza. andahexa nje iminwe yakho macala de afumane neempawu umqolo ekhaya. Musa kukhanda phezu izitshixo. Zama ukusebenzisa amandla kancinci kangangoko kunokwenzeka.
Impumelelo kunye nokuphuculwa zixhomekeke ukuzimisela kwakho kunamathela touch ukuchwetheza emva kokuba ugqibile ukufunda. Kuba abo ukuze mathidala, cinga ukuba ngaphezu uya kuphila ixesha lokufunda kwiiveki ezimbalwa ngokunyuka imveliso.
Kufuneka ufunde ukusebenzisa izitshixo eziphambili kunye Ctrl and Alt izitshixo - oku kuluncedo kakhulu zebhodi yezitshixo.
Ukuziqhelisa eyidlalayo ebomini yindlela kakhulu zilwandise ubuchule bakho kwaye uzithembe.
Ukucwangcisa sisiqhelo ngo 'Isantya iimvavanyo' ukuphucula isantya yakho ukuchwetheza.